Midowga Afrika oo cambaareeyay weerar lagu qaaday xarun AMISOM ay ku lahaayeen Janaale – Radio Muqdisho
Midowga Afrika oo cambaareeyay weerar lagu qaaday xarun AMISOM ay ku lahaayeen Janaale
Mogadishu, 1 September 2015: Wakiilka gaarka ah ee Miowga Afrika u qaabilsan Soomaliya Danjire Maman Sidikou ayaa cambaareeyay weerar maanta lagu qaaday xarunta ciidamada AMISOM ay ku lahaayeen deegaanka Janaale ee gobolka Shabeelaha Hoose, halkaasi oo ay markii dambe ciidamadu dib ula wareegeen.
War-saxaafadeed ka soo baxay xafiiska Danjire Maman Sidikou ayaa lagu sheegay in gaari kuwa xamuulka qaada ah oo laga soo buuxiyay waxyaabaha Qarxa lagu bartilmaameedsaday xarunta ciidamada Nabad Ilaalinta Midowga Afrika ee AMISOM ay ku lahaayeen deegaanka Janaale, iyadoo dagaallo kadib ay ciidamadu AMISOM si buuxdo ula wareegeen xaruntooda.
Wakiilka gaarka ah ee Miowga Afrika u qaabilsan Soomaliya Danjire Maman Sidikou oo cambaareeyay weerarka lagu qaaday ciidamada AMISOM ayaa ku tilmaamay in falkaasi uu aha mid wuxuushnimo ah, isagoo ciidanka AMISOM ku amaanay sida geesinimada leh ee ay isaga difaaceen weerarka lagu soo qaaday, ayna diyaar u yihiin in cadowga ay ka difaacaan shacabka Soomaaliyeed.
Danjire Sidikou ayaa shacabka iyo dowladda Uganda uga tacsiyadeeyay askartii ku geeriyootay weerarka lagu soo qaaday xarun ciidamada AMISOM ay ku lahaayeen Janaale ee gobolka Shabeelah Hoose, isagoo xusay in weerarkaasi uu geystay qasaare labada dhinac ah.
Ra’iisul Wasaaraha Dalka Oo Qaabilay Wafdi Ka Socday Mareykanka+Sawirro
Guddoomiyeyaasha dhalinyarada gobollada qaar oo kulan ku yeeshay Muqdisho “SAWIRRO”
Guddoomiyeyaasha dhalinyarada gobollada qaar oo kulan ku yeeshay Muqdisho "SAWIRRO"